အတွေးမီးခိုးများ | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on November 9, 2009
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: အိပ်မပျော်တဲ့ကဗျာ.	Leaveacomment
Written by – အေးချမ်း
မင်းပေးတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ကို အခါခါဖွာလို့
ဘာလို့ဝေးကွာရတာလဲ ဆိုတာ ငါ..မသိဘူး
လွမ်းတော့ လွမ်းတတ်တယ် ကောင်လေးရဲ့….
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုခြင်းမှာ ကောလဟာလသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာရှင်အဖွဲ့က ကြေညာ →